मोदी नेपाल आउन लाग्दा सख्त बिरोधमा बन्यो यस्तो गित ! भारतमा समेत मच्चियो शनशनी ! भिडियो सहित !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदैछन् । नेपालको जनकपुर, काठ्माण्डौं लगायत उनी मुस्ताङको मुक्तिनाथ सम्मको यात्रा गर्दैछन् । उनी नेपाल आउनुपूर्व समाजिक संजालमार्फत पनि मोदीले जानकारी दिएका छन् ।
मोदीले नेपालको भ्रमणको बारमो ट्विट गर्दै सम्पूर्ण जानकारी दिएका हुन् । नेपालीहरुले भने भारतले एक बर्ष अघि लगाएको नाकाबन्दीको सम्झना गर्दै मोदी बिरुद्ध सामाजिक संजालमा खनिएका छन् । कतिपयले मोदी भ्रमणका दिन १० मिनेट घरका बत्ती निभाएर व्ल्याक आउट गर्नका लागि आह्वान गरिएको छ ।
उक्त कार्य नाकाबन्दिको समयमा मोदीले गरेको निर्णयको सांकेतिक विरोध ठहर्नेछ ।कतिपयले नेपाली जनताको तर्फबाट स्वागन नगरिएको पनि भनेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला कस्तो कस्तो कुराहरु समाजिक संजालमा भरि अहिले फैलिय रहेका छन् त्यति मात्र हैन बरिष्ट लोक दोहरी कलाकार निलमनी भण्डारीले आफ्नै रचना र लय भर्खरै गित समेत निकालेका छन् हेरौ भिडियो ।